Somalidu waxay tidhaahda:Inaad sheekeysaa way fudud dahay,laakiin in aad shaqeysaa way adag tahay,maayar saleebaan xasan xadi wuxuu muujiyey shaqo wanaag. | Gabiley News Online
Somalidu waxay tidhaahda:Inaad sheekeysaa way fudud dahay,laakiin in aad shaqeysaa way adag tahay,maayar saleebaan xasan xadi wuxuu muujiyey shaqo wanaag.
March 16, 2019 - Written by maxamed jeex
Baryahan danbe waxaa wax ka qora jaraa,idada dalka somaliland oo ka hadla maayarada JSL,waxaana isku soo hadhay maayaradii dalka labo maayar hadaba waa kuwee labada 2 maayar? Su,aashu wey cadahay waana mid inta badan ay saadaalinayeen waxayna kala yihiin maayarka Borama saleebaan xasan xadi iyo maayarka Berbera Abdishakur Mohamed Hassan (ciddi)
Mid kamid ah Jaraa,idka JSL ayaa maalmahan wuxuu soo qoraayey inuu yidhaahdo waxaa ugu wax qabad batey maayarada dalka somaliland maayarka borama saleebaan xasan xadi iyo maayarka Berbera Abdishakur Mohamed Hassan (ciddi)
isaga oo su,aal soo dhaxdhigey bulshada midkeebaa mudan number one ka?
Hase yeeshee ku dheeraan maayo ka jawaabista dooda odhaneysa maayarka borama iyo maayarka berbera midkee galaaya kalinta kowaad su,aashaasi waxaan weydiinayaa ama aan dhaxdhigayaa bulshada reer somaliland.
haddii aan ku dheeraado waxaan noqonayo qof meel dheer wax ka eegaaya laakiin u baahan inaan fasiraad badan soo bandhigno,macneynana inaan is garab dhigno waakuma? Qofka mudnaanta kowaad lihi .
Anigu markaan eego labada maayar ee bulshadu leedahay keebaa kalinta kowaad ah horta waa inaad is garab dhigtaa labada magaalo,Borama waa caasimada labaad ee ugu population ka badanle Marka laga reebo magaalada Hargeisa sidaasi darteed si walba wey ka baaahi badnaaneysaa Borama magaalada Berbera markaa maayarka borama saleebaan xasan xadi ayaan siinayaa 1 number one ka number two 2 Waxaan sinayaa maayarka Berbera.
balse waxaan qallinka u qaatay inaan fikirkeyga ka dhiibto wax yaabaha ay is weydiineyso bulshada reer somaliland iney ka faloodaan oo ay is weydiyaan maayarada Borama iyo Berbera kebaa galaaya numer one? Dadbadan oo arintaasi aan weydiiyey waxay u bateen jawaaabtoodu maayarka borama.
Siyaasiyiintu way kala Hinaasaan!!! Ee ayaan dadka qaar aaney ka hinaasin qoraalkan anigu waxaan cabirey sida jaraa,idka JSL ay wax uga qoreen ayaan ana uga faaloodey, maahmaah somaliyeed ayaa waxay tidhaahdaa Duco dad ma wada deeqdo! Lkn maayar saleebaan xasan xadi intii uu joogey wax muuqda ayuu qabtey.
Xafiiska wararka gabileynewsonline.com